Global Voices teny Malagasy » Mankalaza Ny Medaly Volafotsy Azon’i Erick Barrondo Tamin’ny Dia An-tongotra i Goatemala · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Aogositra 2012 2:57 GMT 1	 · Mpanoratra Renata Avila Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Goatemalà, Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka, Lalao Olaimpika
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitray manokana momba ny Lalao Olaimpika ao Londona 2012 .
Mankalaza ny fandresena voalohany azony tamin'ny Lalao Olaimpika fanao rehefa Lohataona tamin'ny Londona 2012  i Goatemala. Ny Sabotsy 4 Aogositra, azon'i Erick Barrondo Garcia  ny medaly volafotsy  tamin'ny fandehanana an-tongotra 20km ho an'ny Lehilahy . Vao nivoaka ny vaovao, ireo mpampiasa ny media sosialy, isan'izany ireo mpanao politika sy olo-manan-kaja hafa, dia nitehaka sy niarahaba ny fandresena mendrika azon'i Barrondo.
Miarahaba azy amin-kafanam-po ilay Pop-star Ricardo Arjona (@Ricardo_Arjona ) [es] :
@Ricardo_Arjona [es]: Tahian'Andriamanitra ianao ry Erick Barrondo, Tsy mbola nirehareha tahaka izao aho. Ny medaly voalohany ho antsika, misaotra anao. Ho ela velona i Guate!
Ny filoha lefitra, Roxana Baldetti (@roxanabaldetti ) [es], dia manoratra ao amin'ny Twitter hoe:
Erick Barrondo amin'ny Lalao Pan American 2011. Sary avy amin'ilay mpampiasa Flickr aula2pl, ampiasàna ny Creative Commons licence (CC BY-NC 2.0)
@roxanabaldetti [es]: Ohatra iray amin'ny ezaka sy ny fahasahiana i Erick Barrondo. Hitahy azy anie Andriamanitra! Nofy lasa tena zava-misy ny medaly!
Ilay mpitantara fanatanjahantena, Edgar Galindo (@Galindogt ), dia mizara sary iray  ahitàna ity atleta miavaka ity eny ambony lampihazo, vonona handray ny medaliny. Toy ny mbola manonofy noho ny fandreseny i Barrondo .
Erick Barrondo dia teraka tany Aldea Chuyuc, any amin'ny kaominin'i San Cristóbal Verapaz , iray amin'ireo faritra tena mahantra indrindra ao amin'ny firenena izay tena mizaka manokana ny vokatry ny adin'ny zava-mahadomelina. Nambara fa ny tanànany sy ny firenena manontolo dia samy niomana ho amin'ilay fankalazana.
Araka ny ambaran'i Opina el Balón (@opinaelbalon) [es], Barrondo dia nandefa ity hafatra manaraka ity ho an'ny fireneny :
@opinaelbalon  [es]: Erick Barrondo: “Fa mbola hirehareha fatratra aho raha toa ny olona hanary ny fitaovam-piadiany ka hanakalo izany aminà kiraro ‘sneakers’ mba handehanana eny amin'ny toerana fanaovna fanatanjahantena sy hanao fanazaran-tena”
Ao anatinà firenena iray izay vaovao miseho isan'andro ny herisetra, ny kolikoly ary ny fahantrana, ity fandresena ity dia noharahabaina sy noraisina ho toy ny anton-javatra tokony hankalazaina ny asa mafy sy ny tohana nataon'ny fianakaviana mba hamadihana nofy iray ho lasa zava-misy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/08/06/36575/
 Lalao Olaimpika fanao rehefa Lohataona tamin'ny Londona 2012: http://en.wikipedia.org/wiki/2012_Summer_Olympics
 Erick Barrondo Garcia: http://en.wikipedia.org/wiki/Erick_Barrondo
 ny medaly volafotsy: http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_medal
 fandehanana an-tongotra 20km ho an'ny Lehilahy: http://www.london2012.com/athletics/event/men-20km-walk/phase=atm092100/index.html
 sary iray: http://twitter.com/galindogt/status/231821225628938240/photo/1
 San Cristóbal Verapaz: http://en.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_Verapaz
 @opinaelbalon) : http://twitter.com/Opinaelbalon